Uzokhipha ophekwe uJaiva Zimnike – Maskandi Media
Uzokhipha ophekwe uJaiva Zimnike
Ngivumele mthandi wengoma ngikwethulele nangu umfana ophekwe kahle ngoba uphekwe isandla esivunyiwe kule ndima. Noma ungabuza uMthandeni Igcokama elisha umfoka Manqele
uzokutshela ukuthi uyasazi isandla sikamfoka Miss ofundisa engafundile. Ujaiva ungumculi ongenamona kanti futhi ungumuntu othandayo ukusebenza nabanye abaculi. Akumangazi ukuthiaveze uMqansa insizwa esencane
ekhombisa ikhono eliyisimanga. Le nsizwa ifunde lukhulu ngesikhathi ethatha ama notes nama slides kule nsizwa yaseNquthu eMsamo isigodi. Ithe uma yethula uMqansa kubathandi bomculo yathi:
“ANgibingelele esizweni sonke sikaPhunga noMageba. Sizwe sakithi ngithi angiwe ngamadolo omabili phambi kwenu bese nginethulela isigqoko maqede ngichome lo mfana osemncane uphaphe lwegwalagwala”.
“Le nsizwa inekhono eliyisimanga engigakaze ngilibone kwabaningi esengisebenzile nabo. Ngizocela ukuthi nimamukele ngezanda ezifudumele ukuze naye akhuthale anenzele into yamehlo nento enizoyizwa ngezindlebe zenu maqede ningayikhaleli imali yenu”.
“Siyazi kunzima emculweni ngoba sifike siveze abaculi abasebancane bese benyamalala ngoba ikhono lithanda ukuba lifishane. Kodwa uMqansa insizwa engiyibhekisise kakhulu kwazise ngisebenze neBhova ngafunda ukuthi ubhekisiswa kanjani umculi ngaphambi kokuthi umdedele asebenze”.
“Ngangikhona ededela inkosi yomaskandi esanda kukhothama Ichalaha. Ngangikhona ephasisa uDlubheke umfoka Khuzwayo esho ethi lo mfana usaya kude kakhulu wazibala izizathu ezenza asho kanjalo”. Kusho uJaiva.
“Ngiyabonga nami uma sekuze kwafezeka lokhu osekube isifiso sami iminyaka eminingi edlule. Ngiyathemba bazongemukela abathandi bomculo ngoba ngifisa ukubazwisa into emnandi kakhulu”. Kubeka uMqansa.
Previous Previous post: Ulenyusile izinga uMlungu
Next Next post: USongqongqo uzopika uJaiva neMfezemnyama